Motio Nsonye - Motio
Soterre maka Qlik Sense
Soterre maka Tableau
MotioCAP - Nyocha Cognos
Maka nyocha IBM Cognos
Njikwa ụdị na ntinye
Nnwale ibu na nrụgide
Nlekota na ịdọ aka na ntị
Nweta nkwalite ụlọ ọrụ
BI & Blog Blog
Inye otu gị na uru nyocha na-adịgide adịgide
Motio na -arụ ọrụ nchịkwa BI na -agwụ ike ma na -ahazi usoro mmepe BI siri ike ka ndị ọkachamara nyocha gị lekwasị anya n'ihe ha dị mma na: na -enye ndị njikwa azụmaahịa ọgụgụ isi na -arụ ọrụ iji nye ha nkọwa zuru oke nke azụmahịa ha.
Ntị MOTIOCI Ndị ahịa
Ntọhapụ ọhụrụ nke MotioCI (ụdị 3.2.10 FL9) dị maka nbudata.
Mmezi mperi dị mkpa:
Na-elebara ọghọm Log4j2 dị oke egwu CVE-2021-45105 site na imelite na Log4j2 v2.17.
Nke a bụ ndozi na enweghị mbelata a chọrọ ozugbo ndị ahịa kwalitere na ụdị ewepụtara ọhụrụ a MotioCI. Ọ bụrụ na ndị ahịa agbasoworị usoro nke anyị Akụkọ KB ebe a, ha enweghị nkwalite iji belata okwu. Ọ bụrụ na ihe nchekwa chọrọ n'ime nzukọ gị chọrọ imelite na v.2.17, a ga-emerịrị nkwalite ahụ.
Budata site na ntaneetị MotioCI 3.2.10 FL9 (Motio achọrọ akaụntụ weebụsaịtị).
IHE: Nke a anaghị emetụta onye ọ bụla ọzọ Motio sọftụwia - MotioPI, MotioCAP, Onye IQ, Reportcard or Soterre
Motio nkwado dị ebe a iji nyere gị aka na-akwụghị ụgwọ na nkwalite gị na 3.2.10 FL9 Kpọtụrụ Motio nkwado.
Ihe omume na webinars
Jikọọ na anyị!
Ị maara nkwado adịchaghị maka Gitoqlok bụ n'efu?
Ọ bụrụ na ị na-eji Gitoqlok, ngwa mgbakwunye efu maka Qlik Sense nke na-atụgharị ihe a na-ahụ anya yana scripts data n'ime ihe nchọgharị gị ozugbo, wee jide n'aka na ị deba aha maka nkwado adịchaghị! Ọ bụ kpam kpam n'efu!
Na-eme ka ọdịiche dị n'etiti Git na Qlik Sense
Ịchọrọ usoro ọrụ enweghị nkebi na Qlik Sense. Kedu ka ị ga-esi ruo ebe ahụ?
Ị dịla njikere ịmụta otu esi eme ka ahụmịhe Qlik Sense gị rụọ ọrụ nke ọma site na akpaaka ka ị na-ejigide nrube isi na ụkpụrụ nhazi? Ndị ọkachamara anyị ga-akọwa otu esi eji obi ike Qlik na-enweghị ibu ọrụ nchịkwa ma ọ bụ karịa.
Anyị chọrọ inyere gị aka dozie nsogbu BI gị! Ka anyị jikọọ n'otu n'ime ihe omume ndị a na -abịanụ na webinars.
Lelee Ihe Omume niile & Webinars
Ngwọta ngwanrọ anyị na -enyere gị aka nweta ihe ịga nke ọma BI na nchịkọta Cognos, Qlik, na nhazi atụmatụ nke TM1 kwadoro.
na MotioNgwanrọ dị n'akụkụ gị, ị ga -enweta arụmọrụ nke ọma n'ọrụ gị, melite ogo na izi ezi nke akụ ozi, nwekwuo arụmọrụ ikpo okwu, nweta oge ngwa ngwa n'ahịa, wee nweta njikwa njikwa.
Nchịkọta IBM Cognos
Ngwọta maka imezi nkwalite Cognos, mbughari, njikwa ụdị & njikwa mgbanwe, na -akpaghị aka nnwale & ọrụ nchịkwa, melite arụmọrụ, na -enyere CAP & SAML aka, na mbugharị aha/nnọchi oghere.
Ngwọta maka njikwa ụdị na njikwa mgbanwe na Qlik ma melite arụmọrụ nke ndị na -ebuga ya.
Nchịkọta Atụmatụ IBM
Ngwọta maka njikwa ụdị na njikwa mgbanwe na Cognos TM1 & Nchịkọta nhazi, na -eme ka usoro nkenye dị mfe, melite ọrụ nchịkwa yana ijikwa mgbanwe nchekwa.
Akụkọ Ịga nke Ọma nke Ndị Ahịa
Ejila okwu anyị maka ya. Gụọ banyere ndị ahịa anyị na otu Motio enyerela ha aka imezi usoro nyocha ha wee chekwaa oge na ego bara uru.
Iji data na-ebuso nje COVID-19 ọgụ
Disclaimer Awụla paragraf a. M na-ala azụ ịbanye n'ime esemokwu ndị a, na-abụkarị mmiri ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mana otu echiche rutere m mgbe m na-eje ije nkịta m, Demic. Enwetara m MD ma anọwo m n'ụdị nlekọta ahụike ma ọ bụ ndụmọdụ kemgbe. N'oge gara aga ...
Ị maara Cognos kwalite omume kacha mma?
Kemgbe ọtụtụ afọ Motio, Inc. ewepụtala “Omume Kachasị Mma” gbara gburugburu nkwalite Cognos. Anyị mepụtara ihe ndị a site na iduzi mmejuputa ihe karịrị narị ise wee gee ihe ndị ahịa anyị nwere ikwu. Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ihe karịrị mmadụ 500 gara otu n'ime anyị ...
Motio, Inc. Na -enweta Gitoqlok
Motio, Inc. Na -enweta Gitoqlok na -ejikọ njikwa njikwa siri ike na -enweghị mgbagwoju teknụzụ PLANO, Texas - 13 Ọktoba 2021 - Motio, Inc., ụlọ ọrụ ngwanrọ nke na -enyere gị aka ịkwado uru nyocha gị site n'ime ka ọgụgụ isi na nyocha azụmaahịa gị ...
Yabụ Ikpebiela nkwalite Cognos… Ugbu a gịnị?
Ọ bụrụ na ị nọ ogologo oge Motio onye na -eso ụzọ, ị ga -ama na anyị abụghị ndị ọbịa maka nkwalite Cognos. (Ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụrụ Motio, nabata! Obi dị anyị ụtọ na ị nwere) Akpọrọ anyị "Chip & Joanna Gains" nke nkwalite Cognos. Ọ dị mma na ahịrịokwu ikpeazụ bụ ikwubiga okwu ókè, ...
Atụla egwu, nkwalite Cognos dị mfe dị ebe a
Ndị otu nọ na CoBank dabere na Cognos maka mkpesa arụmọrụ ya yana sistemụ mkpesa isi ego. Idobe nkwalite Cognos na -enye ha ohere idobe njikọta na ngwa na sistemụ BI ndị ọzọ ha. Ndị otu ahụ nwere ndị ọrụ azụmaahịa 600 nwere ole na ole na -emepe akụkọ nke ha na oghere “Ọdịnaya m”.
Lelee Ọmụmụ Ihe niile
Gụọ Blog anyị
Gụọ Motio ngwaahịa “otu esi eme,” omume kacha mma BI & ọnọdụ ụlọ ọrụ, na ndị ọzọ.
blogNchịkọta azụmahịaNdị isi ahia egoNchịkọta CognosNlekọta ahụike Motio PịaUncategorized
Disclaimer Awụla paragraf a. M na-ala azụ ịbanye n'ime esemokwu ndị a, na-abụkarị mmiri ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mana otu echiche bịara m mgbe m na-eje ije nkịta m, Demic. Enwetara m MD ma anọwo m n'ụdị nlekọta ahụike ma ọ bụ ndụmọdụ kemgbe. N'ime ...
blogNchịkọta CognosNweta nkwalite ụlọ ọrụupgradesỊkwalite Cognos
Ị dịla njikere ịhazi ma mezie igwe okwu BI & nchịkọta gị?
Software na-akwụghị ụgwọ
Budata site na ntaneetị MotioPI freeware. Ma ọ bụ rịọrọ MotioPI ma ọ bụ MotioCI maka iji ya na nkwalite Cognos Analytics gị.
Onweghi n'efu: 1 (877) 362-8708
© 2021 Motio. Ikike niile echekwabara ● Usoro na ọnọdụ ● amụma nzuzo